Oduu Injifannoo WBO, Waxabajjii 17, 2020
HomeAfaan OromooOduu Injifannoo WBO, Waxabajjii 17, 2020
Via Raajii Guddataa
GAARA ABBAA SEENAA
Godina Wallaggaa Lixaa gaara Abbaa Seenaa bakka GABAA KAMISAA jedhamutti ganama kana Waxabajjii 17/2020 naannoo sa’a 4:00tti WBO’n waraana Dr. Ashaaggiree kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf dhala namaa dararan konkolaataa 3f tokko ganamaan afaan buufateera. Kanaaf, uummatni naannichaa aarii namoota nagaatti bahuu waan dandeessuuf of eeggannoo cimsaa.
G/Q/Wallaggaa aanaa Anfilloo
Godina Q/Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda GOOMII jedhamutti ganama kana Waxabajjii 17/2020 naannoo sa’a 5:00tti WBO’n waraana Dr. Ashaaggiree kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf dhala namaa dararuuf olii gadi kaattu irratti tarkaanfii fudhateen du’aa fi madoon adabeera. Kanaaf, uummatni naannichaa aarii namoota nagaatti bahuu waan dandeessuuf of eeggannoo cimsaa.
Cuunfaa Tarkaanfii WBO Zoonii Lixaa Guyyaa Har’aa Waxabajjii 17/2020
1ffaa. Waxabajjii 17/2020
Godina Wallaggaa Lixaa gaara Abbaa Seenaa bakka GABAA KAMISAA jedhamutti ganama kana Waxabajjii 17/2020 naannoo sa’a 4:00tti WBO’n waraana Dr. Ashaaggiree kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf dhala namaa dararan konkolaataa 3f tokko ganamaan afaan buufateera.Kanaaf uummatni naannichaa aarii namoota nagaatti bahuu waan dandeessuuf of eeggannoo cimsaa.
2ffaa. Waxabajjii 17/2020
Godina Q/Wallaggaa Aanaa Anfilloo ganda GOOMII jedhamutti ganama kana Waxabajjii 17/2020 naannoo sa”a 5:00tti WBO’n waraana Dr.Ashaaggiree kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf dhala namaa dararuuf olii gad kaattu irratti tarkaanfii fudhateen du’aa fi madoon adabeera.Kanaaf uummatni naannichaa aarii namoota nagaatti bahuu waan dandeessuuf of eeggannoo cimsaa.
Oduu Tarkaanfii Marsaa 3ffaa
G/Q/Wallaggaa aanaa SAYYOO
Godina Q/Wallaggaa Aanaa SAYYOO ganda ALAKUU GAAMBII bakka addaa BADDEESSOO jedhamutti guyyaa kana toora sa’a 7:30tti Waxabajjii 17/2020 WBO’n waraana Dr. Ashaaggiree kan Oromoo fi Oromummaa dhabamsiisuuf dhala namaa dararuuf olii gad kaattu irratti tarkaanfii fudhateen du’aa fi madoon adabeera. Kanaaf uummatni naannichaa aarii namoota nagaatti bahuu waan dandeessuuf of eeggannoo cimsuun hordofuun barbaachisaadha.
Walleewwan Qabsoo fi Gooticha WBO Hamilchiisan!